DEG DEG:- Odayaasha dhaqanka reer Hiiraan oo si aan caadi ahayn uga soo horjeestay shirka madasha wadatashiga qaran ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Odayaasha dhaqanka reer Hiiraan oo si aan caadi ahayn uga soo horjeestay shirka madasha wadatashiga qaran ee Muqdisho
Warar goordhaw naga soo gaaray magaalada B/weyne ayaa sheegaya in halkaasi ay kulan culus ku yeesheen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan.
Odayaashaasi ee kulanka ka qeyb-galay ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan islamarkaana ay qaadaceen shirka madaxda Soomaalida ee madasha wadatashiga qaran ee maanta uga furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ah ugaaska beesha Xawaadle oo ka hadlay kulankaasi ka dhacay magaalada B/weyne ayaa sheegay inaysan jirin cid u meteleeysa shirka madasha wadatashiga qaran ee maanta ka socda magaalada Muqdisho, islamarkaana wixii shirkaasi kasoo baxa aanay quseynin.
Wuxuu sidoo kale Ugaaska sheegay in gobolka Hiiraan ay taladiisa ka go’do Odayaasha dhaqanka oo kaliya, isagoo cambaareyn dusha ka saaray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, kulankaan ay odayaasha gobolka Hiiraan ku yeesheen magaalada B/weyne ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo ay odayaashaasi uga soo horjeedaan shirka madasha wadatashiga qaran ee ka soconaayo magaalada Muqdisho, iyadoona dhinaca kale ay jiraan dhaliilo ay odayaashaan ka tabanayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya.